जब मुख्यमन्त्री राउतले बिज्ञप्ति नै निकालेर जिउँदो पत्रकारलाई श्रद्धाञ्जली दिए, त्यसपछि…….! — Sanchar Kendra
जब मुख्यमन्त्री राउतले बिज्ञप्ति नै निकालेर जिउँदो पत्रकारलाई श्रद्धाञ्जली दिए, त्यसपछि…….!
पत्रकार गुप्ता बोलेपछि तत्कालै उपचारका लागि पुनः अस्पताल पठाइएको छ। तर प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीले नै जिवितै मान्छेलाई समवेदना दिएपछि उनको आलोचना भएको छ । जिवितै पत्रकारलाई बिज्ञप्ती नै जारी गरेर समवेदना श्रद्धाञ्जली दिनु उनको गैरजिम्मेवारपूर्ण कार्य भएको आफन्तले बताएका छन् ।
यसैबीच विपक्षी र सत्ता साझेदार दल मात्रै होइन, आफ्नै मन्त्रीहरूबाट समेत सहयोग नपाइरहेका प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा हानेपछि झन् दबाबमा परेका छन्। पछिल्लो पटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छापा हानेपछि थप सङ्कटमा परेका छन्।
प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरिरहेको ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ कार्यक्रममा अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेपछि १५ असोजमा अख्तियारले छापा हानेको थियाे। कार्यक्रमका लागि साइकल खरीदमा अनियमितता भएको आरोप छ।